July 2019 – Trend.com.mm
စိတ်ကောက်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို ဒီလိုချော့ပါ…
Posted on July 31, 2019 by Wint
သင်ဟာ ရိုမန်တစ်မဆန်တတ်လည်း စိတ်ကောက်နေတဲ့ ကောင်မလေးကိုတော့ မချော့ပဲ ပစ်ထားလို့မရပါဘူး။ ခဏခဏ စိတ်ကောက်နေတာပဲ .. သူ့ဟာသူုပြန်ပြေသွားမှာပါလို့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on စိတ်ကောက်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို ဒီလိုချော့ပါ…
Glow Skin မိတ်ကပ် Look လေးရအောင် ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ?
Posted on July 31, 2019 by Noel
ကြည်ကြည်ဝင်းဝင်းလေးနဲ့လှနေစေတဲ့ Glow မိတ်ကပ်ခြယ်သမှုပုံစံဟာ အခုလတ်တလော ပျိုမေတို့ကြားမှာခေတ်စားနေပါတယ်။ဒါကြောင့် Trend ပျိုမေတို့လည်း Glow skin မိတ်ကပ်လေးနဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on Glow Skin မိတ်ကပ် Look လေးရအောင် ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ?
၀က်ခြံတွေဟာ တစ်နေရာတည်းမှာပဲ အမြဲပေါက်နေတတ်လား?
Posted on July 31, 2019 August 1, 2019 by Noel
၀က်ခြံတွေက တစ်ခါလာလည်းဒီပါးပေါ်ပဲ အမြဲလာလာပေါက်တတ်လား။ဒါဟာ အကျင့်ဆိုးတွေကြောင့်ဖြစ်သလို ကိုယ်သုံးစွဲနေတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကြောင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ ၀က်ခြံထွက်တိုင်း တစ်နေရာတည်းမှာပဲ အမြဲလာလာပေါက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် ဘာလို့လဲဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on ၀က်ခြံတွေဟာ တစ်နေရာတည်းမှာပဲ အမြဲပေါက်နေတတ်လား?
၂၈ရာခိုင်နှုန်းသော Food Delivery တွေဟာ သင့်ရဲ့အစားသောက်တွေကို ယူစားနိုင်တယ်လို့ လေ့လာသူများဆို
ကဲ… တကယ်ဟုတ် ၊ မဟုတ်ဆိုတာတော့ မပြောတတ်ပေမယ့် လေ့လာချက်အသစ်အရ customer တွေမှာယူထားတဲ့ အစားသောက်တွေကို Food » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Food, LifestyleLeaveaComment on ၂၈ရာခိုင်နှုန်းသော Food Delivery တွေဟာ သင့်ရဲ့အစားသောက်တွေကို ယူစားနိုင်တယ်လို့ လေ့လာသူများဆို
ကမ်းခြေသွားပြီး ပရိသတ်တွေကို Surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Park Bo Young
တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးချောလေး Park Bo Young ဟာ သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကို Surprise လေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Park » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ကမ်းခြေသွားပြီး ပရိသတ်တွေကို Surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Park Bo Young
”The Divine Fury” မင်းသားနှစ်ယောက်ကို လာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင် V
ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၃၁ရက်နေ့မှာ ပြသတဲ့ ” The Divine Fury” ရုပ်ရှင်မှ မင်းသားနှစ်ယောက် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ”The Divine Fury” မင်းသားနှစ်ယောက်ကို လာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင် V
Posted on July 30, 2019 by Wint
ကိုယ်ဟာ ဘယ်နေရာမှာမှ အသုံးမကျတော့သလို ခံစားချက်ဟာ လူတိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါလေးတောင် မလုပ်တတ်ဘူးလားလို့ တစ်ယောက်ယောက်ဆီက အပြောခံရတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်တွေ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသုံးမဝင်ဘူးလို့ထင်လာတဲ့အခါ
IU အတွက် ကော်ဖီကားလက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့ပြန်တဲ့ မင်းသား Lee Joon Gi
Posted on July 30, 2019 by Noel
IU နဲ့ Lee Joon Gi ဆိုတာ အရမ်းချစ်ခင်ရင်းနှီးကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ပရိသတ်တိုင်းလိုလိုသိကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ခင်မင်မှုက » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on IU အတွက် ကော်ဖီကားလက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့ပြန်တဲ့ မင်းသား Lee Joon Gi
ခန္ဓာကိုယ်က အညစ်အကြေးဆဲလ်သေတွေဖယ်ရှားဖို့အတွက် လွယ်ကူရိုးစင်းတဲ့နည်းလမ်းများ
သင့်ရဲ့အသားအရည်အမျိုးအစားက ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကိုပုံမှန်ဖယ်ရှားပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။တစ်ချို့က မျက်နှာကိုပဲဂရုစိုက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ဖို့မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။မျက်နှာလေးပဲလှပြီး ခန္ဓာကိုယ်အသားအရည်က မကြည်လင်ဘူးဆို အဆင်မပြေပါဘူးနော်။ဆဲလ်သေတွေကင်းမှ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, Lifestyle, NewsLeaveaComment on ခန္ဓာကိုယ်က အညစ်အကြေးဆဲလ်သေတွေဖယ်ရှားဖို့အတွက် လွယ်ကူရိုးစင်းတဲ့နည်းလမ်းများ
မလိုင်အပြည့်နဲ့ အိမ်ဖျော်လက်ဖက်ရည်ကို အကြိုက်သောက်ကြမယ်…
တစ်ခါတစ်လေ လက်ဖက်ရည်ဆိမ့်ဆိမ့်လေးသောက်ရတဲ့ အရသာကို လွမ်းကြမယ်ဟုတ်… အရင်တုန်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး ထွေရာလေးပါးအကြောင်းတွေပြောကြတာကို သတိရနေဦးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆိုင်မှာသောက်ရတာ နည်းတယ်လို့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Food, LifestyleLeaveaComment on မလိုင်အပြည့်နဲ့ အိမ်ဖျော်လက်ဖက်ရည်ကို အကြိုက်သောက်ကြမယ်…